သံပရိုခြမ်းလေးတွေကို အိပ်ယာဘေးထားအိပ်ခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ - ONE DAILY MEDIA
သံပရိုသီးကို ရနှေေးနဲ့ စိမျသောကျရငျ အစာခြဖေကြျခွငျးနဲ့ ကိုယျခံအားစနဈအတှကျ အကြိုးရှိစပေါတယျ။ သံပရိုသီးရဲ့ စိတျဝကျစားစရာ အကြိုးကြေးဇူးတှလေညျး အမြားကွီး ရှိပါသေးတယျနောျ။ သံပရိုသီးရဲ့ စှမျးအားတှကေ မကုနျဆုံးနိုငျအောငျပါပဲ။ သံပရိုသီးက အိပျစကျနတေဲ့ အခြိနျမှာတောငျ အကြိုးပွုနိုငျပါတယျ။ သံပရိုခွမျးလေးတှကေို အိပျယာဘေးမှာ ထားအိပျရုံပါပဲ။
– သံပရိုသီးကို အခွမျးလေးတှဖွေဈအောငျ လှီးလိုကျပါ။
– သံပရိုခွမျးတှကေို ပနျးကနျလုံးတဈလုံးထံ ထညျ့ပါ။
– ပနျးကနျလုံးကို အိပျယာဘေးမှာ တဈညလုံးထားပါ။
ညတိုငျးထားပေးမယျ ဆိုရငျတော့ အံ့အားသငျ့စရာ ရလဒျတှကေို မွငျတှေ့ရမှာပါ။
အမရေိကနျနိုငျငံရဲ့ လူဦးရေ 32% မှာ သှေးတိုးရောဂါ ရှိပါတယျ။ သံပရိုသီးက သှေးတိုးရောဂါအတှကျ တကယျကို အသုံးဝငျပါတယျ။ သံပရိုခွမျးလေးတှကေို အိပျယာဘေးမှာ ထားပေးရုံနဲ့ သှေးတိုးကစြပေါတယျ။ အပွငျးအထနျ သှေးတိုးလာရငျတော့ ဆရာဝနျဆီသှားပွတာ အကောငျးဆုံးပါပဲ။
2. စိတျဖိစီးမှုတှေ လြော့စတေယျ။
အကွောငျးအရာပေါငျး မြားစှာကို တဈနကေုနျ စဉျးစားလုပျကိုငျပွီးတဲ့ အခါ အာရုံကွော အဖှဲ့အစညျးက ပငျပနျးလာပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ အိပျရေးဝဝနဲ့ အနားယူနိုငျဖို့က အရေးကွီးလာပါပွီ။ သံပရိုခွမျးရဲ့ရနံ့လေးတှကေ အာရုံကွော အဖှဲ့အစညျးကို သကျသာရာရစပွေီး ပငျပနျးမှု ပြောကျစပေါတယျ။
3. အသကျရှူရ ကောငျးစတေယျ။
သံပရိုသီးရဲ့ အငျတီအောကျစီးဒငျ့က နှာခေါငျးပိတျခွငျးနဲ့ ဓာတျမတညျ့ခွငျးမြားကို သကျသာစပေါတယျ။ အခနျးထဲက လထေုညဈညမျးမှုမြားကိုလညျး သံပရိုခွမျးက သနျ့စငျပေးပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ သံပရိုခွမျးလေးတှကေို အိပျယာဘေးမှာ ထားခွငျးဖွငျ့ အနံံ့အသကျဆိုးတှကေို ဖယျရှားနိုငျမှာပါ။
4. အငျးဆကျပိုးတှကေို ဖယျရှားပေးတယျ။
သံပရိုသီးက အငျးဆကျပိုးတှကေို ဖယျရှားနိုငျမယျ့ သဘာဝနညျးလမျးကောငျးတဈခုပါပဲ။ အငျးဆကျပိုးတှကေ သံပရိုခွမျးရဲ့ရနံ့ကို မခံနိုငျလို့ မွနျမွနျထှကျပွေးသှားကွမှာပါ။
5. မနကျခငျးအိပျယာထရငျ အားအငျပွညျ့ဝစတေယျ။
သံပရိုသီးက အသကျရှူခွငျးနဲ့ အာရုံကွောအဖှဲ့အစညျးအတှကျ အကြိုးရှိစပေါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ အိပျရေးဝဝ အိပျပြောျနိုငျပါတယျ။ သံပရိုသီးရဲ့ ရနံ့က ပြောျရှှငျစတေဲ့ ဟောျမုနျးထုတျလုပျမှုကို တိုးမွှငျ့ပေးပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ မနကျခငျးဆိုရငျ ပြောျပြောျရှှငျရှှငျ လနျးလနျးဆနျးဆနျး နိုးလာနိုငျမှာပါ။
သံပရိုခြမျးလေးတွကေို အိပျယာဘေးထားအိပျခြငျး၏ အကိုးကျေးဇူးများ
သံပရိုသီးကို ရေနွေးနဲ့ စိမျသောကျရငျ အစာချေဖျကျခြငျးနဲ့ ကိုယ်ခံအားစနဈအတွကျ အကိုးရှိစပေါတယျ။ သံပရိုသီးရဲ့ စိတျဝက်စားစရာ အကိုးကျေးဇူးတွလေညျး အများကွီး ရှိပါသေးတယျနောျ။ သံပရိုသီးရဲ့စွမျးအားတွကေ မကုန်ဆုံးနိုငျအောင်ပါပဲ။ သံပရိုသီးက အိပ်စကျနတေဲ့ အခိန်မှာတောငျ အကိုးပြုနိုင်ပါတယျ။ သံပရိုခြမျးလေးတွကေို အိပျယာဘေးမှာ ထားအိပျရုံပါပဲ။
– သံပရိုသီးကို အခြမျးလေးတွြဖေဈအောငျ လှီးလိုက်ပါ။
– သံပရိုခြမျးတွကေို ပနျးကန်လုံးတစ်လုံးထံ ထည့်ပါ။
– ပနျးကန်လုံးကို အိပျယာဘေးမှာ တဈညလုံးထားပါ။
ညတိုငျးထားပေးမယျ ဆိုရငျတော့ အံ့အားသင့်စရာ ရလဒျတွကေို မြငျတွေ့ရမှာပါ။
အမေရိကန်နိုငျငံရဲ့ လူဦးရေ 32% မှာ သွေးတိုးရောဂါ ရှိပါတယျ။ သံပရိုသီးက သွေးတိုးရောဂါအတွကျ တကယ်ကို အသုံးဝင်ပါတယျ။ သံပရိုခြမျးလေးတွကေို အိပျယာဘေးမှာ ထားပေးရုံနဲ့ သွေးတိုးကျစပေါတယျ။ အပြငျးအထနျ သွေးတိုးလာရငျတော့ ဆရာဝန်ဆီသွားပြတာ အကောငျးဆုံးပါပဲ။
2. စိတ်ဖိစီးမှုတွေ လျော့စတေယျ။
အကွောငျးအရာပေါငျး များစွာကို တဈနကေုနျ စဉျးစားလုပ်ကိုငျပွီးတဲ့ အခါ အာရုံကွော အဖွဲ့အစညျးက ပင်ပနျးလာပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ အိပျရေးဝဝနဲ့ အနားယူနိုင်ဖို့က အရေးကွီးလာပါပွီ။ သံပရိုခြမျးရဲ့ရနံ့လေးတွကေ အာရုံကွော အဖွဲ့အစညျးကို သကျသာရာရစေပွီး ပင်ပနျးမှု ပျောကျစပေါတယျ။
သံပရိုသီးရဲ့ အင်တီအောက်စီးဒင့်က နှာခေါငျးပိတျခြငျးနဲ့ ဓာတ်မတညျ့ခြငျးများကို သကျသာစပေါတယျ။အခနျးထဲက လထေုညဈညမျးမှုများကိုလညျး သံပရိုခြမျးက သန့်စငျပေးပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ သံပရိုခြမျးလေးတွကေို အိပျယာဘေးမှာ ထားခြငျးဖြငျ့ အနံံ့အသက်ဆိုးတွကေို ဖယျရှားနိုင်မှာပါ။
4. အငျးဆက်ပိုးတွကေို ဖယျရှားပေးတယျ။
သံပရိုသီးက အငျးဆက်ပိုးတွကေို ဖယျရှားနိုင်မယျ့ သဘာဝနညျးလမျးကောငျးတစ်ခုပါပဲ။ အငျးဆက်ပိုးတွကေ သံပရိုခြမျးရဲ့ရနံ့ကို မခံနိုင်လို့ မြနျမြန်ထွကျပြေးသွားကွမှာပါ။
5. မနက်ခငျးအိပျယာထရငျ အားအငျပြညျ့ဝစေတယျ။
သံပရိုသီးက အသကျရှူခြငျးနဲ့ အာရုံကွောအဖွဲ့အစညျးအတွကျ အကိုးရှိစပေါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ အိပျရေးဝဝ အိပျပျေ်နာိုင်ပါတယျ။ သံပရိုသီးရဲ့ ရနံ့က ပျောျရှှငျစတေဲ့ ဟ်မောုနျးထုတ်လုပ်မှုကို တိုးမြှငျ့ပေးပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ မနက်ခငျးဆိုရငျ ပျောျပျောျရှှငျရှှငျ လနျးလနျးဆနျးဆနျး နိုးလာနိုင်မှာပါ။